Sharmaarke,Gaas,Faroole iyo Juurile oo ku kulmay magaalada Garoowe[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Sharmaarke,Gaas,Faroole iyo Juurile oo ku kulmay magaalada Garoowe[Sawirro]
GAROOWE – Waxaa saaka shir iyo quraac ku yeeshay magaalada Garoowe siyaasiyiinta kala ah Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke,Cabdiraxmaan Faroole,Cabdiweli Cali Gaas iyo Cabdirisaaq Cismaan Juurile.
Shirkan oo ka dhacay guriga Madaxweynihii hore ee Puntland ahna Musharax Madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Faroole ayaa ahaa mid saddex gessoed ah kaasoo la aaminsan yahay in looga hadlay Doorashada iyo doorka Musharaxiinta qaarkood.
Shirkan oo qaatay 6-saacadood kana bilowday markii ay wada quraacden ayaa ahaa mid saxaafadu dibad joog ka ahayd balse xogta laga helayo ayaa u badan iney kawada halleen arrimaha doorashada sanadkan.
Warar maalmihii u dambeeyey soo baxayey ayaa sheegaya in Cabdiraxmaan Faroole oo musharax ah ay si weyn uga soo horjeedaan Raiisal Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali oo qushiisu ah musharax kuwaasoo xili ahaa kuwa isugu dhaw.
Sahan Online ayaa heshay iney jireen siyaasiyiin u kala dabqaadayey Faroole iyo Xasan Shiikh Maxamuud oo u ballan qaaday in Dr. Faroole uu la raadinayo xilal kale oo ay kamid tahay Xoghayaha IGAD ee Soomaaliya oo sanadka danbe u sharaxantahay.
Dr. Cabdiraxmaan Faroole ayaa la aaminsanyahay in xubno taageersan uu ku leeyahay Xildhibaanada cusub ee lagu doortay magaalada Garoowe.
Shirkan oo aan xaqiiq fiican laga hayn ayaa u muuqda mid Cumar Cabdirashiid Cali iyo Dr Cabdiraxmaan Faroole ku gorgortamayeen isla markaana isku dayayaan in ay xaliyaan waxa u dhaxeeya.